ကြာရှည်ခံသောသဘာဝအရောင် Red Velvet Matte နှုတ်ခမ်းနီကို ၀ ယ်ပါ။ ပို့ဆောင်ခအခမဲ့၊ အခွန်မပါပါ WoopShop®
ကြာရှည်ခံသောသဘာဝအရောင် Red Velvet Matte Lipstick
အရောင် 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
ကြာရှည်ခံသောသဘာဝအရောင် Red Velvet Matte Lipstick - ၀၁ backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
မော်ဒယ်နံပါတ်: Matte နှုတ်ခမ်းနီ Makeup Lip Tint Gloss Matt Stick Batom Matte
ပါဝင်ပစ္စည်းများ - Matte နှုတ်ခမ်းနီ Lip Gloss
ပိုက်ကွန် WT: 3.5g
သော့ချက်စာလုံးများ: Matte နှုတ်ခမ်းနီ၊ ကြာရှည်ခံ၊ Sexy Lip Gloss၊ သဘာဝနှုတ်ခမ်းနီ
မှာယူမှုသည်ဖော်ပြချက်နှင့်ကိုက်ညီသောကုန်ပစ္စည်းများကိုလက်ခံရရှိသည်ကျေးဇူးပါ woopshop !!!
မြန်ဆန်သောပေးပို့မှု၊ ဖော်ပြချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်၊ ငါဒုတိယအကြိမ်ယူသည်
စူပါနှုတ်ခမ်းနီ! အမှန်တရားသည်အချိန်ကြာသွားသည်၊ မရှင်းလင်းသောအကြောင်းပြချက်များဖြင့်ပြန်လာပြီးစတိုးဆိုင်ကငွေပြန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့သည်၊ ဒါပေမယ့်ငါအခိုင်အမာပြောပြီးနောက်ဆုံးတော့ရခဲ့တယ်။ အရာအားလုံးသည်ဖော်ပြချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်၊ ထုပ်ပိုးပုံသည်အလွန်လှပသည်၊ chic၊ အလွန်စျေးကြီးသည်၊ ဆိုဒ်ရှိအရောင်ကဲ့သို့အသံ၊ ငါအကြံပြုသည်))